Beddelaan PC iPhone Messageto
Waxaan rabaa in aan badbaadiyo taariikhda iMessage ay ka mid yihiin ku lifaaqan on my iPhone in kombiyuutarka, si aan koobi ka kartaa ama u soo dir aan Email. Ma suurogalbaa? Waxaan u isticmaali iPhone 4, macruufka 5.0.1. Thanks :)
Weli ka iPhone badbaadin iMessage in PC ama Mac adigoo shaashada ka mid ah? Waxa ay haatan u jooji. Habka ugu weyn si loo badbaadiyo iMessage on iPhone la badbaadiyo sida file ah oo la akhrin karo iyo editable, ma sawir. Waxaad aan ka hor samayn karaa, laakiin hadda aad u samayn karaa. Iyada oo ah qalab iMessage dhoofinta, waa shaqo fudud.
Ma garanayo meesha laga helo qalab iMessage dhoofinta ah? Laba talooyinka halkan: mid waa Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (Windows) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (Mac) (diyaar u Mavericks). Sidaa daraadeed, waxaad si buuxda u iskaan karo iyo ka aad iPhone 5S / 5C / 5 / 4s / 4 / 3GS badbaadin beddelaad iMessages, oo dhan iPad iyo iPod xiriiri 5/4. Ka sokow, labada qeybood oo caawin toos ah ka heli tirtiray waxyaabaha iMessage aad ka iPhone, iPad iyo iPod taabto. Kale waa TunesGo Wondershare . Waxay kuu ogolaanaysaa inaad badbaadin iMessages la lifaaqyada sida HTML / XML file a / TXT. Just leeyihiin isku day ah in lagu hubiyo ay tahay waxa aad rabto ama aadan in.
Xalka 1: Transfer iyo Save iPhone SMS Message ka iPhone in PC ama Mac la TunesGo
Xalka 2: kabtay oo ka iPhone Bedelka iPhone SMS Fariinta PC ama Mac la Dr.Fone ee macruufka
TunesGo ku siinayaa awood ay ku badbaadin iMessages, MMS, SMS iyo lifaaqyada ay, sida music, videos iyo sawiro on your computer Windows. Download qalab u leedahay in isku day ah.
Tallaabada 1. Isku aad iPhone / iPod / iPad in computer Windows ah
Orod TunesGo on computer Windows ka dib markii la rakibey. Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan aad iPhone / iPad / iPod in computer Windows ah. Qalabkani waxa uu aqoonsan doonaa iPhone / iPad / iPod si deg deg ah ka dibna waxa ay u muujiyaan in uu furmo suuqa hoose.
Fiiro gaar ah: TunesGo si fiican u la shaqeysaa iPhone, iPad, iPod, sida iPhone 5, iPad iyo iPod mini xiriiri 5 socda macruufka 6 iyo macruufka 5.
Tallaabada 2. Save iMessages in computer
In galeeysid bidix. Guji "SMS". Fariimaha qoraalka ah oo dhan, iMessages, MMS waxaa lagu muujiyey in uu furmo SMS on xaq ah. Dooro iMessages in aad jeclaan lahaa in lagu badbaadiyo. Markaas, guji "Dhoofinta in". In ay menu hoos-hoos, doortaan "dhoofiyo oo dhan Messages" ama "Dhoofinta soo xulay Messages" .Markaasay, waxaad dooran kartaa in dhoofin iMessages in file HTML ah, file XML ama file TXT ah. Marka uu furmo suuqa file browser soo booda, caleenta aad Windows PC ilaa helo folder Raadinayo iMessages wax badbaadiya.
Download TunesGo in ay isku dayaan sidii ay u badbaadin conversasions iMessages.
Download version tijaabo ah Dr.Fone ee macruufka hoose ee lacag la'aanta ah ee:
Haddii aad tahay qof user Windows ah, fadlan dooro version Windows ee aad iPhone. Lacag iPhone iMessage in aad PC ama Mac waxaa la samayn karaa si la mid ah. Next, aynu isku dayaan sidii ay u wada buuxiso shaqo la version Windows ah.
Marka aad ordi barnaamijka, waxaad arki doonaa suuqa kala muhiimsan ee on your computer sida soo socota. Markaas xiriiriyaan iPhone via cable USB ah.
Wixii iPhone 5S / 5C / 5 / 4s, iPad la isha bandhigay, iPad mini, iPad cusub, iPad iyo iPod 2 xiriiri 5 (ma ku lifaaqan fariin):
Wixii iPhone 4 / 3GS, iPad iyo iPod 1 xiriiri 4 (oo ay ku jiraan ku lifaaqan fariin): Waxaad dooran kartaa Mode Advanced si ay u soo galaan hab sare scan.
Tallaabada 2. Scan iMessage on qalab aad
Haddii aad isticmaasho iPhone 5S / 5C / 5 / 4s, iPad la isha bandhigay, iPad mini, iPad cusub, iPad 2 ama iPod xiriiri 5, waxaad si toos ah riixi kartaa Start Scan on suuqa kala kor ku xusan si aad u iskaan.
Haddii aad isticmaasho iPhone 4 / 3GS, iPad 1 ama iPod xiriiri 4, aad u baahan tahay si ay u soo galaan hab iskaanka qalab ee. Waxaad sameyn kartaa sida sharaxaad ku saabsan suuqa kala, ama uu raaco jidka hoos ku qoran:
Ku hay qalab aad, oo guji Start on furmo suuqa.
Qabo Xukun iyo badhamada Home aad iPhone waqti isku mid ah ee saxda ah 10 ilbiriqsi.
Fur button Power markii 10 seconds maray, laakiin sii haysta button Home for kale 15 ilbiriqsi.
Marka fariin leh in aad ku soo gashay hab si guul soo booda, kaa fasaxi kara badhanka Home ah. Markaas sugaan in mudo ah, barnaamijka si toos ah iskaan doonaa iPhone ka dib markii la falanqeeyo. Waqtigaas, aad arki doonaa suuqa kala hoose.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha iyo taariikhda iMessage badbaadin your computer
Skaanka aad baabbi'in doonaa wakhti yar. Dabadiisna, waxaad heli doontaa warbixin scan sida ku cad suuqa kala hoose. Halkan, dooran Messages, ka dibna aad ku eegaan karo waxyaabaha dhan aad fariin, oo ay ku jiraan iMessage iyo attachents ah. Calaameeyey oo aad ku badbaadin karto iMessages aad kombiyuutarka sida file HTML ah. By jidkii, waxaad tagi kartaa Lifaaq Message ay kala gooni u badbaadin content warbaahinta ka iMessage ah.
Barnaamijka waxaa soo kaban karto xogta tirtiray ka iPhone.
Sidaa awgeed, qoraalada halkan helay waxaa ka mid ah kuwa dhawaan la tirtiray iyo in hadda jira ee ku saabsan iPhone.
Waxaad isticmaali kartaa badhanka ugu sareysa si ay u kala soocaan: bandhigaan waxyaabaha tirtiray oo keliya.
> Resource > iPhone > Sidee si ay u gudbiyaan iyo wada hadalka gurmad iPhone SMS Message iMessage in PC ama Mac